Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dad badan ayaa ku dhaawacmay qaraxa baska ee Ruushka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • News • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Qarax xoog leh ayaa dhacay markii rakaabku ay baska fuulayeen meel basaska laga raaco oo ku taal meel weyn oo laga dukaameysto.
Ilaa 30 qof ayaa baska saarnaa markii uu qaraxu dhacay.
Qaraxa ayaa dhacay markii rakaabka ay saarnaayeen baska.
Qarax ayaa ka dhacay boosteejada basaska ee bartamaha magaalada laga dukaameysto.
Qaraxa ayaa ka dhacay badhtamaha magaalada Voronezh fiidnimadii Khamiista
Bas rakaab ah ayaa ku qarxay magaalada Voronezh ee bartamaha Ruushka.
Muuqaalo ka soo baxaya goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya baskii uu qaraxu kala go’ay.
Muuqaalo ku baahaya online -ka ayaa muujinaya baska oo si weyn u waxyeeleeyay qaraxa, iyada oo alwaaxdii jirkiisa iyo saqafkiisa ay dillaaceen.
Sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah, dad badan ayaa ku dhaawacmay qaraxa.
Qaraxa ayaa ka dhacay badhtamaha magaalada Voronezh fiidnimadii Khamiista.
Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa dhacay markii rakaabku ay baska fuulayeen goob basaska laga raaco oo ku taal meel weyn oo laga dukaameysto.
Illaa 30 qof ayaa saarnaa baska xilliga qaraxa, darawalka oo ka badbaaday qaraxa ayaa u sheegay warbaahinta gudaha.
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa oo ay ku jirto hal haween ah oo lugaha laga jaray, sida ay ku warrantay warbaahinta gudaha oo xiganaysa ilo wareedyo.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Voronezh ayaa warbaahinta u sheegay in argagaxisadu aysan ka mid ahayn noocyada ay tixgeliyeen mas'uuliyiinta marxaladda baaritaanka.